कात्तिक १६, २०७४ काठमाडौं, १६ कात्तिक— प्रर्दशनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृह कुनै पनि राजनीतिक माहोलबाट अछुतो रहदैनँ । राष्ट्रिय राजनीतिका हरेक क्रियाकलापमा सधैं मूर्त झैं सहभागिता जनाउने सभागृह बिहिबार आगामी मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि काठमाडौंका ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेद्वारी दर्ता स्थल बन्यो ।
संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिइएको आगामी निर्वाचनका लागि निकै उत्साहित बन्दै सभागृहको माहोल तताएका थिए, रबिन्द्र मिश्रले ।
उनले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराउँदै पत्रकारहरुसँग आफ्नो उम्मेद्वारी नयाँपनका लागि भएको दाबी गरे ।
उनका प्रमुख प्रतिद्वन्दी काँग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंह भने अपरान्ह २ बजे मात्रै उम्मेद्वारी दर्ताका लागि सभागृह प्रवेश गरेका थिए । लामो इतिहास बोकेको नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता बिरुद्धको उम्मेद्वारी जितकै लागि हो त ? पत्रकारको यो प्रश्नमा मिश्रले भने, ‘जित्नकै लागि उम्मेद्वार बनेको ।’ अझँ उनले आफ्नो जित ११० प्रतिशत सुनिश्चित भएको दाबी समेत गरे ।
सभागृहमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएका नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधिसभाका अधिकांश उम्मेद्वार हेभिवेट नै रहेका छन् ।
यसैगरी वाम गठबन्धनका तर्फबाट पनि काठमाडौँमा क्षेत्र नं १ मा चर्चित माओवादी केन्द्र नेता जनार्दन शर्माका भाइ अनिल शर्मा, २ मा माधवकुमार नेपाल, ३ मा कृष्ण राई, ४ मा डा राजन भट्टराई रहेका छन् ।
उम्मेद्वार र मतदाताका आ–आफ्नै अपील !
सभागृहमा बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म भीडभाड थियो । यो ७ घण्टाको बीचमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन आएका उम्मेद्वारहरुले आफूले जिते केही काम गर्ने अठोट गरे ।
उम्मेदवारी दर्ता गराउने रवीन्द्र मिश्रको टोली पछ्याउने क्रममा सभागृहको गेटसम्म आइपुगेकी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर चारकी एक महिला मतदाता रमिला शर्माले उम्मेद्वारप्रति आक्रोश पोखिन् ।
लोकान्तरसँग उनले भनिन्, ‘नेताहरुले महंगा र गहु्रगा माला लगाएर आउँदैमा हामीलाई के हुन्छ ?’ उम्मेद्वारसँग के अपेक्षा छ भन्ने प्रश्नमा उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दै उनले थपिन्, ‘हाम्रो चाबहिलमा धुलो धुँवाको अवस्था देख्नुभएको छ ?, यिनीहरुले सुधार्छन् भनेर अपेक्षा गर्नु ?’
रमिलाले आक्रोश पोख्दै गर्दा युवा तथा चर्चित नेता नेपाली काँग्रेस क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेद्वार गगन थापाले अब युवाहरुको सहभागिता बढे सम्बृद्धि तथा विकासले फड्को मार्ने बताए ।
थापाले सभागृहमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै गर्दा गलाभरी लगाएका माला छाम्दै आफूलाई जिताउन अपील मात्रै गरिरहेका थिए । रमिलाजस्तै सभागृहको गेटसम्म पुगेका कयौं मतदाताहरुले विकासका लागि नेताहरुसँग अपील गरिरहेका थिए भने सबै उम्मेद्वारले चाहिँ आफूलाई जिताउन अपील गरिरहेका थिए ।
बिहिबार भीडभाड देखिएको सभागृह परिसरमा जसरी पनि आगामी चुनाव सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज भने सबैको एउटै थियो ।
कात्तिक १६, २०७४ मा प्रकाशित